Ahoana ny fanesorana ny mpifantina profil RGB rehefa manokatra sary ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Esa varavarankely fifantina profil profile izay miseho rehefa manokatra sary iray hanovana azy amin'ny Adobe Photoshop isika, dia mahasoa manokana ho an'ny mpamorona, fa ho an'ny olon-tsotra kokoa dia manahirana ny manaiky an'io safidy io amin'ny alàlan'ny default foana.
Haneho anao ny fomba fanesorana io varavarankely io izahay fisafidianana mombamomba loko ao amin'ny Photoshop izay mamela antsika hanova ny mombamomba na tsia, manome sehatr'asa na hisafidy ny mombamomba RGB izay ilaintsika hanombohana ny fanontana anay amin'ireo safidy samihafa.
Raha ho an'ny maro dia manahirana ny tsy maintsy fanidiana ity varavarankely ity isaky ny manokatra sary izahay, ireto dingana manaraka ireto dia ahafahanao manala io varavarankely kely io:
Andao ho any Amboary> Fikirana loko.
Ao amin'ny "fenitra fitantanana loko" dia ho hitantsika ireo safidy roa tadiavintsika.
Izahay dia mamono ny safidy "Anontanio rehefa manokatra" amin'ny fahasamihafana amin'ny mombamomba.
Izao koa no ataontsika amin'ny "profiles tsy hita."
Sakano ireo safidy roa ireo isaky ny mandeha andao hanokatra antontan-taratasy vaovao amin'ny Adobe Photoshop hanana ny sary misokatra isika hanombohana ny fanontana. Amin'izany fomba izany dia hamonjy segondra tsara vitsivitsy isika, indrindra raha hiasa miaraka amina antontan-taratasy marobe isika.
Tadidio fa raha mila ianao miasa miaraka amin'ny mombamomba RGB manokanaIty safidy ity dia zava-dehibe amin'ny fampandehanana azy, na dia avelantsika ho toy ny nanamboarantsika azy tamin'ity torolàlana kely ity aza ianao, dia manana safidy foana ianao handrindrana izany avy amin'ireo loko miloko ao amin'ny Photoshop.
Raha tsy izany, raha tsy izany, mety ho izany ianao miasa amin'ny maody loko izay tsy mety ho an'ny asa ho an'ny mpanjifa na ho anao. Iray amin'ireo antsipiriany ireo izay tsy maintsy raisina mba hahazoana fampisehoana tsaratsara kokoa rehefa miara-miasa amin'ny Photoshop isika ary noho izany dia tsy mandany fotoana be loatra amin'ny fanokafana rakitra samihafa amin'ny programa tianao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fanesorana ny fikandrana mifantina loko ao amin'ny Adobe Photoshop rehefa manokatra sary
Christian gonzalez dia hoy izy:
Raha tokony hampianatra ny fomba hanesorana ny varavarankely dia mampianatra ny fomba hamoronana habaka loko ary hampifanaraka tsara kokoa ireo profil
Valiny tamin'i Cristian Gonzalez
Ity sary ity dia nantsoina ho sary mahavariana indrindra amin'ny tantara